Obama iyo Bush oo ilmo-abti ah | WWW.SOMALILAND.NO
Obama iyo Bush oo ilmo-abti ah
Cilmi-baadhayaal ka tirsan xarunta New England Historic Genealogical Society ayaa waxaa ay soo ogaadeen qoysaska ay ka soo jeedaan saddexda u tartamaya jagadda M/weynaha ee Maraykanka. Saddexdaas oo kala ah Obama, Clinton iyo MacCain.
Clinton ayaa asal ahaan xaga hooyo ka soo jeeda qoys Faransiis-kanadiaan ah. Waxaana ay ilmo abti iskugu toosanyihiin dumarka heesa ee Madonna, Celine Dion iyo Alanis Morissette. Obama oo ay dhashay hooyo cad oo gobolka Kansas ka timi iyo aabe kiiniyaati ahi, ayaa waxaa ay ilmo abti iskugu toosanyihiin lix madaxweyne oo maraykan ah, isla markaana ay ku jiraan Bush iyo aabihii Bush-weyne. McCain ayaa ilmo abti 6aad ay iskugu toosanyihiin marwadda 1aad ee Maraykanka Laura Bush.
Obama ayaa waxaa ay meel iska soo galaan m/weynayaal labada xisbiba ah. Waxaana Labada Bush kasokow ay kala yihiin:Gerald Ford, Lyndon Johnson, Harry S. Truman iyo James Madison. Iyo weliba M/ku xigeenka Dick Cheney iyo Sir Winston Churchill.
Obama ayaa badankaba dadka kaga qosliya ilma abtinimadda ay iskugu toosanyihiin Cheney.
Obama iyo Bush ayaa ilmo abti 10aad isku ah. Waxaana ay iska soo galaan oday dhintay 1662 oo magaciisa la yidhaa Samuel Hinkley.
Dhinaca jilayaasha filimadda ayaa waxaa jilaaga caanka ah ee Brad Pitt ay Obama isku yihiin ilmo abti 9aad. Waxaana isku xidha oday dhintay 1769 oo magaciisa la odhan jiray Edwin Hickman.
Brad Pitt xaaskiisa Jolie iyo Hillary Clinton ayaa iyaguna sidoo kale isku ah ilmo abti 9aad. Labaduba waxaa ay dhinac ka soo galaan to Jean Cusson oo ku dhintay St. Sulpice, Quebec, sanadkii 1718.
« – Cali Faarax waa la cunsiriyadeeyey Ninkii loo haystay argagaxisadda oo beri la keeni doono maxkamadda »